Cajaa’ib: Maanso maqal iyo akhris ah
Maansadaan la magacbaxday Cajaa’ib waxay soo baxday 26kii Jannaayo 2008, waxayna maansadu ka hadlaysaaarrimo arrimo ay ka mid yihiin:
Sida ay dowladihii caalamku indhaha uga qabsadeen xasuuqa iyo xadgudubyada ka socda Soomaaliya, iyagoo waliba ay qaarkood si toos ah uga qaybqaadanayaan falalka ka dhanka bani’aadminnimada ee lagu hayo maatida Soomaaliyeed.
In haddii maanta ay dowladihii dunida iyo ururradii ay ku mideysnaayeenba ay naga hiilliyeen, aysan taasi la macno aheyn in la garab iyo gaashaan la’yahay. Sida loo arag xunyahay, looma Alle la’a. Haddii iimaan iyo Allekacabsi lala yimaadana waa hubaal in Eebbe uu awooddiisa xoogga badan noogu hiillin doono.
Maansada Cajaa’ib waxay ku billaabmeysaa:
Cajaa’ibka taagan maanta:
Cashiiradan la isku bi’iyay
Soomaali ku ciribgo’eyso.
Caa’iladoodiina ka faani
Isagu calafka ma go’aansho
Cidliyo geerigo’an ma joogno
4. Golaha Qaramada Midoobay.
Inj. Maxamed Cabdi Cibaar